तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र, कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र, कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ?
तमाम हल्ला चिर्दै किमले पठाए कामदारलाई पत्र, कहाँ छन् उत्तर कोरियाली नेता किम ?
एजेन्सी, १५ वैशाख । उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन कहाँ छन् र कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न ह’ल्ला र टीका टिप्पणी आइरहेका छन् । कतिले उनको मृ’त्यु भइसकेको बताएका छन् भने कतिले ग’म्भीर बि’रामी रहेको बताएका छन् । तर यी केवल ह’ल्ला मात्र रहेकाे दक्षिण काेरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।यी हल्लाका बीच नेता किमले उत्तर कोरियाको वनसनमा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण कार्यमा खटिएका का’मदारप्रति आ’भार व्यक्त गर्दै एउटा पत्र पठाएको समाचार पनि बाहिरिएको छ ।
उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार एजेन्सीले अप्रिल २७ मा एक समाचार प्रकाशित गर्दै किमको स्वास्थ्यसम्बन्धी ह’ल्ला ग’लत रहेको बताएको छ ।‘उत्तर कोरियाका नेता किम जोंग उनले वोनसनको पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रमा पर्यटक क्षेत्र निर्माण गर्ने मजदुरप्रति आभार व्यक्त गरे,’ दक्षिण कोरियाको समाचार एजेन्सी योन्ह्यापले उत्तर कोरियाली सरकारी मिडियाको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको, ‘उनको स्वास्थ्यको बारेमा कडा अनुमानको बीचमा उनको निजी विशेष ट्रेन पार्क गरिएको छ ।’वनसन त्यही क्षेत्र हो जहाँ अप्रिल २१ र २३ मा किमको निजी रेल पार्क भएको भन्दै उत्तर कोरिया मामिला हेर्ने दी हेनरी एल स्टिमन सेन्टरको ३८ नर्थ प्रोजेक्टले जनाएको थियो ।
अप्रिल १५ मा सो रेल त्यहाँ देखिएको थिएन ।त्यहाँको केन्द्रीय प्रसारण निकाय दी कोरियन सेन्ट्रल ब्रोडकास्टिङ स्टेसनले पनि सोही रिपोर्ट प्रसारण गरेको छ ।किमको स्वास्थ्यमा ख’रावी आएको र मृ’त्युसम्मको समाचार बाहिर आइरहेको बेला उत्तर कोरियाले किम को पत्र प्रसारण गर्दै भ्र’म चि’र्न खोजेको हो। अप्रिल १५ मा आफ्ना हजुरबुबा तथा उत्तर कोरियाका संस्थापक किम इल सङको ज’न्मोत्सव स’मारोहमा किम अनुपस्थित भएसँगै उनको स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो व्यक्त भएको छ। केही अपुष्ट मीडिया रिपोर्टहरूले मु’टुको श’ल्यक्रियापछि किम ग’म्भीर ख’तरामा हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाएका थिए ।
तर दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले असत्य भन्दै यस्ता अ’नुमान र समाचारहरुलाई खा’रेज गरिदिएका छन् । उनीहरुको अनुसार उत्तर कोरियामा केही अ’नौंठो क’दम चलिरहेको छ र किम वोनसन क्षेत्रमा बसिरहेका छन् भन्ने विश्वास छ ।उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन जिवित र स’कुशलै रहेको दक्षिण कोरियाली अधिकारीलाई उदृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। नेता किमको स्वास्थ्य स्थिति ख’राब भएको र उनको मृ’त्युसमेत भएको खबर कतिपय सञ्चार माध्यममा आइरहेका बेला दक्षिण कोरियाले उनी स’कुशलै रहेको जनाएको हो।
राष्ट्रपतिका विदेश नीति सल्लाहकार मुन चङइनले किम अप्रिल १३ देखि वोन्सान क्षेत्रमा बसेको बताएका छन्। ‘किम जोङ उन जि’वित र स’कुशल छन्’, मुनले भने, ‘उनी अप्रिल १३ देखि वोन्सान क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। त्यस्तो कुनै शं’कास्पद घ’टना पत्ता लागेको छैन।’ अप्रिल १५ मा किमका हजुरबुबाको जन्मोत्सवमा उनी उपस्थित नभएपछि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका थिए। उत्तर कोरियाको राज्य नियन्त्र‍ित सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले अप्रिल ११ मा पो’लिटब्यूरोको बै’ठकमा सहभागिता जनाएका थिए। त्यसपश्चात् उनी सार्वजनिक रूपमा देखा परेका छैनन्।
केही दिनअघि अमेरिकी गु’प्तचर संस्थाले किमको श’ल्यक्रिया भएको साथै उनको स्वास्थ्य स्थिति निकै ना’जुक भएको बताएको थियो। त्यस्तै दक्षिण कोरियाबाट उत्तर कोरियामा आधारित प्रकाशन भइरहेको अनलाईन डेली एनकेले किमको मु’टु सम्बन्धी स’मस्या भएको उल्लेख गरेको छ। साथै उनको लगातार उपचार भइरहेको समेत जनाएको छ। उक्त अनलाईनलाई उ’दृत गर्दै सीएनएनले लेखेअनुसार किमले अ’त्यधिक धू’म्रपान गरेको तथा धेरै ध’पेडीका कारण स्वास्थ्य स’मस्या आएको हो। तर वास्तविकता भने अझै खुल्न सकेको छैन।
बेलायतले बिहीबारदेखि कोरोना विरुद्दको खोप मानिसमा परीक्षण गर्ने
बेलायतमा कोभिड-१९ विरुद्धको खोप परीक्षण सुरु
अमेरिकामा पनि कोरोनाभाइरसका कारण एकको मृत्यु